Apple Watch inobatsira mukutakura pane imwe ndege yemuchadenga | Ndinobva mac
Kune atovepo vanhu vashoma vane chikwereti hupenyu hwavo kuna Apple Watch. Ini pachangu ndingadai ndisiri mupenyu, dai Apple Watch yangu yanga isina kundimutsa neiyo yakadzika frequency yambiro mangwanani iwayo apo moyo wangu wanga uchirova makumi maviri neshanu paminiti.
Nhasi tinotsanangura mashandisiro avakaita Apple Watch pane a kubereka kusati kwasvika izvo zvakauya nekushamisika pakati pegungwa kubhururuka. Chigadzirwa chakashanda kudzora kuberekwa kwemwana achangozvarwa.
Raymond Mounga akazvarwa Mavhiki e11 pamberi pesarudzo pane imwe ndege yeDelta kubva kuSalt Lake City, Utah, kuenda kuHonolulu, Hawaii, musi waApril 28. Amai vake, Lavinia Mounga, vakapinda mukubata pakati pendege.
Vese mwana naamai vakaita rombo rakanaka, sechiremba nanesi vatatu vaive mubhodhi, uye ivo vakatanga kuita chiito ku enda kuendesa chengetedza mucheche kugadzikana kusvikira nguva yekumhara yakamhara gare gare muHawaii.
El Dr. Dale Glenn, chiremba wemhuri paStraub Medical Center, akabatsira nevanamukoti kuti vaunze mwana pasi rose, uye vakaronga hurongwa hwechimbi-chimbi hwekuchengetedza mwana achangozvarwa akatsiga mushure mekusununguka, kudzamara asisakwanise kupinda mune incubator yevana vasati vazvarwa.
Glenn akataura mushure mekuburuka mundiza kuti zviridzwa zviri mungarava zvaive zvisina kukwana kutarisira mwana asati azvarwa, uyo akazvarwa pamasvondo makumi maviri nemapfumbamwe panzvimbo pemavhiki makumi mana. Saka vakagadzirisa inodziya kuchengetedza tembiricha yemwana nemabhodhoro anodziya aive mune microwave. Vakashandisawo a Apple Watch kuongorora kurova kwemoyo kwemwana achangozvarwa, uchimhara ndege.
Mushure mekumhara, amai nemwana vakatamiswa kuchengeteka kuKapiolani Medical Center, uko Raymond achazopedza masvondo mashoma ari mu Incubator kusvikira vaviri ava vaenda kumba. Nhau dzakanaka dzine magumo anofadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Watch inobatsira mukutakura panguva yendege yegungwa